Mmejọ na agbachitere Ọgbọ Na-abịa | Martech Zone
na March Ara Madụ Iri na Isii Egwuregwu na-aga n'ihu, Na-eche na nke a ga-abụ oge zuru oke iji jiri ịnụ ọkụ n'obi egwuregwu egwuregwu ha chọrọ. Na ihe omuma ohuru bụ oge, ihe omuma ihe eji eme ihe na-eji ihe nkpuchi ekpuchi, ma olile anya na ihe atụ basketball basketball na-egosi uru dị n'ịgbalị mbọ ndị ọzọ.
Isi ihe nke infographic gụnyere:
Mmejọ Ọjọọ - Akwụkwọ ntuziaka aga-eme na ngwa ngwa mmeghachi omume oge
Nnukwu Mmejọ - Akpaghị aka akara ọzọ ohere
Bad agbachitere - Na-ekwe ka data mebiri emebi
Nnukwu Nchedo - Igbochi emerụ data
iwekota na-enye ụfọdụ ịtụnanya ọnụ ọgụgụ… ọ bụghị naanị oge ego gị otu nwere ike ime ka, ma accelerated abawanye na ina ọgbọ na-eduga ukwuu azụmahịa pụta. Ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ọmụma ahụ na-elekwasị anya na ịdị ọcha, zuru ezu na ije nke data dị mkpa maka ịchụso ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Tags: basketballNchebechọrọ ọgbọmarch arammejọ
Simplezọ isii dị mfe iji meziwanye Mmetụta Ọdịnaya Gị